ब्लग भनेको आफ्ना कुरा स्वतन्त्र रुपमा राख्ने थलो हो-सुवर्ण तण्डुकार - MeroReport
ब्लग भनेको आफ्ना कुरा स्वतन्त्र रुपमा राख्ने थलो हो-सुवर्ण तण्डुकार
ओलिभ मिडियामा एनिमेटर र ई-लर्निङ डेभलोपरको रुपमा कार्यरत सुवर्ण तण्डुकार, बास्केटबल कोच पनि हुन् । सुवर्णलाई डिजे गर्न पनि असाध्यै मन पर्छ भने उनी स्वतन्त्र फोटोग्राफर पनि हुन् । उनी सामाजिक अभियान्ता पनि हुन् । ब्लगलाई आफ्ना भोगाई ब्यक्त गर्ने माध्यम मान्ने तण्डुकार सोसल मिडियाका साथ साथै ब्लग लेखनमा पनि सक्रिय छन् । मेरो रिपोर्टको साप्ताहिक स्तम्भ साताका ब्लगरमा हामीले उनै सुवर्ण तण्डुकारलाई प्रस्तुत गरेका छौ । प्रस्तुत छ उनीसँगको कुराकानी :
सुवर्ण तण्डुकारलाई के भनेर चिन्ने अलिकति आफ्नो बारे बताइदिनुस न ।
त्यस्तो विशेष केही छैन । मलाई सुवर्ण तण्डुकार नै भनेर चिनेको मनपर्छ।
सोसियल मिडियामा पनि आफ्नै नाम सुवर्ण तण्डुकारले नै चिनिन चाहान्छु ।
मैले सन् २०१२ ग्लोबल प्लेटफर्ममा तालिम लिएपछि ब्लगिङ गर्न शुरु गरेको हुँ ।
केका लागि ब्लगिङ गर्नुहुन्छ?ब्लगिङका लागि समय कसरी मिलाउनु हुन्छ ?
म प्राय:जसो परम्परागत र साँस्किृतिक विश्वासहरु, सामाजिक विभेदहरुमा जनचेतना होस भनेर ब्लग लेख्ने गर्छु ।
म ब्लगकै लागि भनेर समय दिएर लेख्ने भने गर्दिन । म बोल्न सहि विषय हो भन्ने भए पछि मात्र लेख्ने गर्छु । लेख्दा भने कार्यलयको काम सकिए पछि मेरो सहज वातावरण भयो भने लेख्ने गर्छु ।
म समाजमा भईरहेका परम्परागत विश्वासहरुका विरुद्धमा अल्लि ब्यंगात्मक लेख लेख्छु । अनि यस्तै कुरा नै राख्न रुचाउँछु । जसलाई पढेर मानिसहरुले केही बुझुन् भलै आ-आफ्नै तरीकामा किन नहोस ।
तपाँइले चलाउने ब्लगहरु कुनकुन हुन ? http://subarnatandukar.blogspot.com/ बाहेक अरु पनि छन् ?
अहँ छैन । यो नै एक मात्र हो ।
मानिसहरु ब्लगिङ गर्न रहर त धेरै नै गर्छन, तर निरन्तर ब्लग गरिरहन त गाह्रो छ नि है !
हो, निरन्तरता दिन त गाह्रो नै छ अझ पाठकले रुचाउने र आकर्षित हुने बिषयहरु पत्ता लगाउन नि उत्तिकै गाह्रो छ ।
मेरो लागि त सकारात्मक नै छ । ब्लगमा म मेरो भोगाइृका हरेक कुरा लेख्न सक्छु ।
फोटोग्राफी मेरो अर्को रुचिको विषय हो ।
अरुका ब्लग एकदमै कम पढ्छु । मलाई केही सन्देश भएका लेख र ब्लग पढ्न मन पर्छ ।
धेरै हद सम्म सामाजिक हितमै छन । कम से कम मैले पढ्ने गरेका ब्लगहरु चै सामाजिक हितमै देखेको छु ।
ब्लग भनेको आफ्ना कुरा स्वतन्त्र रुपमा राख्ने थलो हो । त्यसैले कुनै पनि कुराले त्यसलाई बाँध्नु हुदैँन जस्तो लाग्छ । तर ब्लगरहरु आफैले स्व-अनुशासन भने पालना गरेको राम्रो हो ।
मैले केही समय अगाडी केही साथिहरुको अनुभवलाई समेटेर 'हन्टेड सिटी काठमाडौं' भनेर ब्लग गरेको थिए । पछि त्यो ब्लगमा आइसके पछि मैले धेरै प्रतिक्रिया पाएँ र थाहा पाएँ कि त्यो त अरु युवाको पनि अनुभुति रैछ ।
तपाइ सोसल मिडियामा पनि सक्रिय हुनुहुन्छ, हामीकहाँ प्रयोगमा आइरहेका सोसल मिडियाका थलोहरु ब्लग, ट्विटर र फेसबुकमा के फरक पाउनुभयो ?
अरु सोसल मिडियाहरुमा अल्लि भिडभाड छ । त्यसमा पनि फेसबुक साथीभाई तथा आफन्तहरुसँग कुरा गर्ने माध्यम बनेको छ भने ट्विटर छिटो सुचना पाउने माध्यम । तर ब्लगका भने पाठक पनि अल्ली कम भएकाले उनीहरु बिच पुग्न भने सकिन्छ ।
आम नागरिकले आफ्नो परिवेश, ठाँउ र अनुभुति अनुसारले नै ब्लग लेख्ने भएकाले केहीहदसम्म मान्न सकिन्छ ।
Comment by Amuna Chapagain on October 16, 2014 at 5:14pm
Congratulations Subarna !!!
Comment by Prakash Lamichhane on October 16, 2014 at 4:59pm